बैंकहरूलाई कल निक्षेपको सीमा | गृहपृष्ठ
Home समाचार बैंकहरूलाई कल निक्षेपको सीमा
काठमाडौं (अस) । अब वाणिज्य बैंकहरूले कुल निक्षेप दायित्वको १० प्रतिशतसम्म मात्र कल (माग तथा अल्प सूचनामा आधारित) निक्षेप संकलन गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीवार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले संकलन गर्नेे कल निक्षेपको सीमा तोकेको छ । विकास बैंक र वित्तीय संस्थाका लागि भने कुल निक्षेप दायित्वको १५ प्रतिशतसम्म मात्र कल निक्षेप संकलन गर्ने सीमा तोकिएको छ ।
यसअघिको एकीकृत निर्देशन–२०७५ मा वाणिज्य बैंकहरूलाई निक्षेप संकलन सम्बन्धी कुनै सीमा तोकिएको थिएन । विकास बैंकलाई भने आफ्नो प्राथमिक पूँजीको बढीमा २० गुणासम्म वित्तीय स्रोत संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कल निक्षेप १ वर्षभित्र (२०७७ असार मसान्तसम्म) तोकिएको सीमाभित्र ल्याउन पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । साथै, यसअघि सम्झौता भएका बाहेक थप कल निक्षेप स्वीकार गर्दा तोकिएको मापदण्ड अनुसरण गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
कल निक्षेप छोटो अवधिको हुन्छ । यस्तो निक्षेप सेवाग्राहीले मागेको बखत बैंकले तुरुन्तै फिर्ता गर्नुपर्छ । ‘खासमा बैंकहरू छोटो अवधिको निक्षेपमा आश्रित नहोऊन् भनेर सीमा तोकेका हौं,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले भने, ‘कर्जा प्रवाहका लागि लामो अवधिको निक्षेप आवश्यक पर्ने भएकाले पनि बैंकले लिने कल निक्षेपमा कडाइ गरिएको हो ।’
यसअघि राष्ट्र बैंकले बचत निक्षेपमा प्रदान गरिने न्यूनतम ब्याजदरभन्दा बढी ब्याज कल निक्षेपमा नदिन निर्देशन दिएको थियो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत माघ र फागुनमा कल निक्षेप संकलन ४ दशमलव १६ प्रतिशतले बढेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गत माघमा रू. ३ खर्ब ४६ अर्ब ३० करोड ४१ लाख कल निक्षेप संकलन भएको थियो । फागुनमा यस्तो संकलन बढेर रू. ३ खर्ब ६२ अर्ब २७ करोड ३७ लाख पुगेको थियो ।